Waayaha Cusub oo ku xayiran Netherlands - BBC Somali
Waayaha Cusub oo ku xayiran Netherlands
Lahaanshaha sawirka waayaha cusub
Kooxda fanaaniinta Soomaalida ah Waayaha Cusub ee uu saldhigoodu ahaa magaalada Nairobi ayaa ku go'doonsan holland... inaanay haatan ku laaban Karin dalka Kenya, sababo ay ku sheegeen in kaararkoodii aqoonsiga ee qaxootinimada laga qaaday ka hor inta aanay ka soo duulin Kenya si ay uga qeyb galaan bandhig nabadeed oo ka dhacay waddanka Holland.
Haatan waxa ay ku xayiran yihiin dalka Holland.
Falis Cabdi Maxamuud, oo ka tirsan kooxdaasi ayaa saddex canug oo ay dhashay ku xayiran yihiin magaalada Nairobi, waxa ay khadka taleefanka ugu warrantay wariyaha BBC Cabdiraxmaan Koronto.
Haddaba, fanaaniintaas sharciga ku haysatay kenya oo laga qaatay waraaqihii aqoonsiga xaaladooda ayaan iuyo waxa uu ka qabo qaanuunka caalamka u dhigan ee qaxootiga,Cabdiraxmaan Koronto, wuxuu ka wareystay kaahiye M ahmed Caalim oo ah qareen yaqaan qaanuunka iyo xuquuqul insaanka iyo arrimaha socdaalka ee arrintan ku saabsan.
Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa tabinaya